Ahoana ny fahitan'ny mpikaroka sy ny tsindrio ny valin'ny karoka Google | Martech Zone
Ny fomba fahitan'ny mpikaroka sy ny tsindrio ny valin'ny fikarohana an'i Google
Alatsinainy Martsa 7, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ahoana ny fahitan'ny mpikaroka sy tsindrio ny valin'ny Google a Pejin'ny valin'ny fikarohana motera (SERP)? Mahaliana fa tsy niova firy izy io nandritra ny taona maro - raha toa ka vokatra organika fotsiny. Na izany aza, aza hadino ny mamaky ny takelaka fotsy Mediative izay nampitahàn'izy ireo ny endrika SERP samihafa sy ny valiny ao anatiny. Misy fahasamihafana azo porofoina rehefa manana endri-javatra hafa tafiditra ao amin'ny SERP toa ny karoka, sarintany ary fampahalalana momba ny kisary fahalalana i Google.
Ny tranokala manana laharana voalohany dia mbola mahatratra 83% ny saina sy 34% ny tsindry amin'ny SERP.
Mediative dia nandalina an'io ary nanome a sary mahafinaritra izay manome tsipiriany momba ny fifandraisan'ny mpikaroka sy ny doka tohanan'ny, carousels, lisitra eo an-toerana ary ny lisitra organika. Tsindrio ilay sary etsy ambony raha hijery azy manontolo.
Ny olona dia tsy mifanerasera amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana an'i Google tamin'ny fomba folo taona lasa izay, ny ankamaroany dia noho ny fampidirana ireo singa vaovao ao amin'ny SERP ho fanampin'ny lisitra biolojika (doka misy karama, valim-pifidianana, karatra fahalalana, lisitra ao an-toerana sns. ). Aiza aloha, ny mpikaroka dia maka fotoana hijerena ny lisitra ambony indrindra miolaka miankavia sy miankavanana, mamaky saika ny lohateny feno, alohan'ny hidina amin'ny lisitra manaraka, ny hitantsika izao dia ny fizahana haingana kokoa amin'ireo lisitra, miaraka amin'ireo mpikaroka ihany no mamaky ireo teny 3-4 voalohany amin'ny lisitra iray.
Na dia ny lisitra biolojika ambony aza dia mahatratra ny mitovy amin'ny habetsaky ny tsindry azy tahaka ny 10 taona lasa izay, hitantsika izao fa mihoatra ny 80% ny tsindry pejy rehetra mitranga amin'ny toerana ambonin'ilay lisitra biolojika faha-4, izay midika fa ny orinasa dia tsy maintsy tanisaina any amin'iny faritra iny SERP hanamafisana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Rebecca Maynes, Mediative
Ny fihetsika nasongadina sasany:
1% monja amin'ireo mpampiasa fikarohana biolojika no mikitika ny pejy manaraka
9.9% ny tsindry amin'ny SERP mankany amin'ny doka tohana ambony
32.8% ny tsindry mankany amin'ny lisitra voajanahary # 1 amin'ny SERP
Ampidino ny Whitepaper an'ny Mediative
Tags: Carouseltahan'ny click-throughFNTlaharanamotera fikarohanapejy momba ny valin'ny fikarohanavalin'ny fikarohanaSEOserptsindry serpserp FNTlisitra serpdoka mpanohana
DemandJump: Marketing mialoha sy fahiratan-tsaina mifaninana